အိမ်နှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအဘို့အလေတိုက်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဟိုက်ဘရစ်စနစ်က - Ningbo အီ Holding Group မှ Co. , Ltd မှ
အများအပြားပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကျွမ်းကျင်သူများအဆိုအရလေနှင့်နေရောင်ခြည် (photovoltaic) နည်းပညာများကိုပေါင်းစပ်တဲ့သေးငယ်တဲ့ "ဟိုက်ဘရစ်" လျှပ်စစ်စနစ်နေရာများကိုအများကြီးတစ်ခုတည်း system.In ဖြစ်စေကျော်အတော်ကြာအားသာချက်များကိုကမ်းလှမ်း, လေတိုက်နှုန်းနေရောင်တောက်ပထွန်းလင်းလာသောအခါနွေကာလ၌အနိမ့်ဖြစ်ကြပြီး အရှည်ဆုံး။ လေတိုက်လျော့နည်းနေရောင်ခြည်မရရှိနိုင်သောအခါတွင်အချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌ခိုင်ခံ့သည်။ လေနှင့်နေရောင်ခြည်စနစ်များများအတွက်အထွတ်အထိပ်လည်ပတ်မှုဆတနေ့နှင့်တစျနှစျ၏ကွဲပြားခြားနားသောအချိန်များတွင်ပေါ်ပေါက်သောကြောင့်, ဟိုက်ဘရစ်စနစ်များကိုသင်ကလိုအပ်သည့်အခါအာဏာကိုထုတ်လုပ်ဖို့ပိုများပါတယ်။
1. PV Array: အဖြစ်အပျက်ကို irradiance ထဲက DC က output ကိုပေးခြင်းစီးရီးအတွက်နှင့် / သို့မဟုတ်အပြိုင်ချိတ်ဆက် PV ပြား၏တစ်ဦးကနံပါတ်။ ဤအပြား၏အရှေ့တိုင်းဆန်နှင့်အတိမ်းစောင်းအရေးကြီးသောဒီဇိုင်း parameters တွေကိုဖြစ်ကြသည်အဖြစ်ပတျဝနျးကငျြအဆီးအတားအနေဖြင့် shading ။
2. လေတာဘိုင်: ဤအရပ်ရှည်ရှည်မျှော်စင်ထိပ်ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်, လေထဲကနေ kinetic စွမ်းအင်စုဆောင်းကာနေအိမ်ရဲ့လျှပ်စစ်စနစ်ဖြင့်သဟဇာတဖြစ်ကြောင်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အားကပြောင်းပေးပါတယ်။
3. Hybrid ကို Controller ကို: ဘက်ထရီဘဏ်တာဝန်ခံကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ခြင်းနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုထမ်းရွက်။
4. ဘက်ထရီဘဏ်: တစ်ခုတည်းဘက်ထရီသို့မဟုတ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့လိုအပ်သောဗို့အားနှင့် amp နာရီစွမ်းရည်များထဲမှကြီးမားသောဘက်ထရီကိုဖန်တီးရန်အတူတကွချိတ်ဆက်မျိုးစုံဘက်ထရီနိုင်ပါတယ်။ အချို့သောနည်းလမ်းများအတွက်ဘက်ထရီ Configuration နဲ့စွမ်းရည်စေရန်အရေးကြီးဆုံးလျှပ်စစ်ပါဝါဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ပညာရှိတဲ့ရွေးချယ်မှုလျှပ်စစ်ပါဝါတစ်တည်ငြိမ်ထောက်ပံ့ရေးအဖြစ်လုပ်ကိုင်ရန်ထိန်းသိမ်းနည်းရိုးရှင်းသောသောစနစ်တစ်ခုအာမခံကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
5. အင်ဗာ: AC ပါဝါထဲသို့ပြားကနေ DC ကပါဝါ±ပြောင်းပြန်လှန်°သောပါဝါ converter ။
6. ပြရန်: အအင်ဗာတာ (AC ဝန်) မှ, ဒါမှမဟုတ်ဘက်ထရီဘဏ် (DC ကဝန်) မှကျွေးမွေးသောအဆောက်အဦးအတွက်ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်ပစ္စည်းကိုဆိုလိုတာပါ။